Shirka ka soconaya Koonfur Afrika ee Pan African oo maalintii labaad galay – Radio Daljir
Maajo 20, 2015 4:55 b 0
Arbaco, May 20, 2015 (Daljir) —Kulankii Baarlamaannada Afrika (Pan African) ayaa ka Furmay Magaalada Johhanseburg ee dalka Koonfur Afrika shalay, iyadoo sannadkan uu kulanka ka qaybgalayo madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta.
Xildhibaanno ka socda baarlamaanka Somalia ayaa iyaguna kulanka ka qaybgalaya iyadoo looga hadli doono Sannadkan Dhibaatooyin dhowr ah oo ka jira Qaaradda Afrika oo ay ka mid tahay colaadda ka taagan dalka Burundi, Argagixsada, weerarrada isir-nacaybka ah ee dalka Koonfur Afrika ka dhacayay iyo Shaqo la’aanta haysata dhallinyarada Afirka.
Madaxweynaha Kenya oo hadal ka jeediyay furitaanka kulanka Pan African ayaa ka hadlay qalaasaha siyaasadeed iyo dhibaatada ay argagixisadu ka waddo Afrika, isagoo sheegay in haatan dalkiisa Kenya uu Wajahayo xaalada aad u adag oo uu kaga horjeedo argagixisada, isagoo intaas ku daray inay ka Guuleysan doonaan Kooxahaas oo uu ku Tilmaamay kuwo ka faa’iideysanaya dhallinyarada soo koraysa ee aan haysan Waxbarashada iyo dhaqale ku filan.
Sidoo kale, Uhuru Kenyatta ayaa Xusay in loo baahan yahay in Dhallinyarada Afrika loo Abuuro Shaqooyin Waxna la baro, si looga badbaado halista Argagaxisada oo uu sheegay inay duufsadaan dhallinyarada si ay ugu dagaalamaan.
Kenyatta ayaa dhanka kale ka hadlay weerarrada ajnabi-nacaybka ah ee Koonfur Afrika ka socday bilihiila soo dhaafay, isagoo yiri. “Dowladda Koonfur Afrika waxaa looga baahan yahay in dadaalladeeda ku aaddan Xakameynta Dhibkan ay sii Xoojiso si Dambiilayaasha Sharciga loo horkeeno.”
Xildhibaannada Soomaaliya uga Qayb-galaya kulankan ayaa iyaguna si aad ah uga Hadlay Dhibaatooyinka lagu hayo Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika, Waxayna Madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqeen inay kasoo Qayb-galaan Kulamadaan oo kale si ay uga hadlaan fikirkooda ku aaddan weerarrada lagu hayo ajnabiga Koonfur Afirka ku nool oo ay Soomaalidu ka mid yihiin.
Ugu dambeyn, Kulankan ayaa socon doona labo Toddobaad ayaa galay maalinkii labaad , Waxaana Diiradda lagu Saari doonaa Dhibaatooyinka Qaaradda Afrika ka taagan, iyadoo lagu Wado inay kasoo Baxaan Dhamaadkiisa Qodobbo lagu Xallinayo Dhibaatooyinka Qaaradda.